88% Off Linux Foundation Coupons & Voucher Codes
Linux Foundation Iikhowudi zekhuphoni
I-10% icinyiwe I-Linux Foundation Coupons. I-Linux Foundation ibonelela nge- $ 100 isaphulelo kwiinyanda ezininzi zekhosi. Kwakhona, unokufumana isaphulelo esongezelelweyo se-25% usebenzisa ikhowudi yekhuphoni "SUMMER25 ″. Eli phetshana lisebenza kuzo zonke iikhosi zeLinux Foundation kunye neenkqubo zokuqinisekiswa. Fumana izibonelelo zamva nje kunye neekhowudi ezikhethekileyo kwiLinux Foundation. Ke ungaze uphoswe lithuba lokonga imali.
I-15% icinyiwe Izaphulelo umndilili wama-42 eedola nge-Linux Foundation ikhowudi yokunyusa okanye ikhuphoni. 19 Iikhuphoni zeLinux Foundation ngoku kwiRetailMeNot.
I-12% icinyiwe IiLinux zeSiseko seLinux Uqeqesho lweSiseko seLinux liqonga elilungiselelwe ukuhambisa olona qeqesho lusemgangathweni ophezulu kubuchwephesha bemithombo evulekileyo njengeKubernetes kunye neBlockchain. Ukusuka kwiwebhusayithi uza kufumana ukufikelela kwizifundo ezivela kwiingcali kuphuhliso kunye nokusetyenziswa kweeprojekthi zomthombo ovulekileyo kuQeqesho lweSiseko seLinux kunye nokufumana isatifikethi esaziwayo.
I-25% Cima nayiphi na iVawutsha yoVavanyo lweeKubernet okanye iBundle Isiseko seLinux: Fumana ama-35% kwiSiza ngokubanzi. Iikhowudi zokunyusa zeLinux Foundation kunye neeKhuphoni ziyahanjiswa, khetha iiTikiti zakho ngokweemfuno zakho, zisebenzise kuqeqesho.linuxfoundation.org, emva koko uyakwazi ukulawula inkcitho yakho ngcono. .
$ 100 Off Sitewide + Isimahla I-Linux Foundation Ball Cap Ikhuphoni elimangalisayo leLinux Foundation kunye nendlela yokuyisebenzisa xa usebenzisa ukubhukisha okanye uku-odola ifom uya kufumana ibhokisi ephawulwe ngokucacileyo apho unokufaka khona ikhowudi yekhuphoni. Xa usiza kuhlawula ixabiso lesaphulelo liya kuboniswa ngokuzenzekelayo. Uthini umgaqo-nkqubo wembuyekezo weSiseko seLinux?
I-20% icinyiwe Nazi iIkhuphoni zamva nje ezibanzi ezivela kwiLinux Foundation [15% OFF] Izaphulelo kuzo zonke iziQinisekiso noQeqesho Gcina i-15% kuzo zonke iinkqubo zoQeqesho lweLinux kunye neenkqubo zokuqinisekisa. Esi sisibonelelo sexesha elimiselweyo ngoMeyi.
I-15% Ikhuphe iOda yakho elandelayo Sebenzisa ikhuphoni kwaye ufumane isaphulelo se-10% kwisatifikethi solawulo esivela kwiLinux Foundation: I-S10 bonisa ikhowudi yekhuphoni ekwabelwana ngayo ngu- @ itsfoss2 Ungaze uphuthelwe coupon!
Ukongeza i-15% kwiNdawo yokuHlala Iikhowudi eziDumileyo zeLinux Foundation Promo. Isaphulelo. Inkcazo. Iphelelwa lixesha. I-25% icinyiwe. Iipesenti ezingama-25 zisuswe nakweyiphi na iodolo. ---. Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60. Ukufikelela kwi-60% kwiikhosi kunye noQinisekiso.
I-15% yokuSebenza kuyo nayiphi na iKhosi ye-IT kunye neKhosi yoQeqesho loLawulo lweNkqubo Usebenzisa ikhowudi yekhuphoni yeLinux Foundation uza kufumana isaphulelo ukusuka kwi- $ 100 ukuya kwi- $ 300. Ungabona unikezo lwamva nje kunye oluhlaziyiweyo lwezaphulelo zekhosi nganye ukusuka apha. Uya kunyuka uye kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 kwiikhosi zokuqinisekiswa usebenzisa iLinux Foundation Coupon evela eSkillslane.com. Umnikelo wangoku weLinux Foundation. Okwangoku, i-Linux Foundation ibonelela ngesaphulelo se-15% kuzo zonke iziqinisekiso kunye neenkqubo zoqeqesho.
Unyaka omtsha wamatshayina! I-25% Cima iVawutsha yoVavanyo kunye neeBundles zeKubernetes CKA kunye neCKAD Isiseko seLinux Ikhuphoni Isiseko seLinux siqhuba izibonelelo ezininzi ngonyaka ngabaphuhlisi kunye nee-sysadmins kunye neengcali ze-DevOps. Oku kulandelayo kukubonelelwa kwakamva kwisiseko seLinux esikhethekileyo kubathandi bobuchwephesha. I-15% icinyiwe] Ukuthengiswa kweXesha eliMiselweyo
I-15% icinyiwe I-Linux Foundation Coupons kunye neKhowudi yokuPhucula. Izibonelelo ezi-3 eziqinisekisiweyo zango-Agasti 2021 Gcina ezinkulu kwiLinux Foundation ngezivumelwano ezimangalisayo kunye neekhowudi zokunyusa! Iikhowudi zokwazisa / Isiseko seLinux Yonke intengiso. Intengiso Okudume kakhulu. Yiba yiKhowudi yokuSebenza eQinisekisiweyo. Isetyenziswe amaxesha angama-60. Isetyenziswe amaxesha angama-60. Intengiso Jonga iikhosi zeLinux ezisebenzayo zeKhowudi ...
I-15% icinyiwe Unikelo lusebenza kude kube nge-8 kaDisemba ngo-2020. Ikhuphoni yeSaphulelo seLinux [Sisebenza ngalo lonke ixesha] Ungafumana isaphulelo se-15% kulo naluphi na uqeqesho okanye ikhosi yeziqinisekiso ebonelelwe yiLinux Foundation ngalo naliphi na ixesha. Konke okufuneka ukwenze kukusebenzisa ikhowudi yekhuphoni ITSFOSS15 kwiphepha lokuphuma.
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-15 kwiOdolo yakho Ngaphandle kweeLinux Foundation coupons, ikhowudi yokukhupha kunye neekhowudi ze-Linux Foundation. Ke ѕіgn uр nоw ukwenza уоur fіrѕt ѕаvіng. Ivenkile ye-оffеr аddіtіоnаl Linux Foundation рrоmоtіоnаl соdеѕ аnd dіѕсоunt оffеrѕ kwi-Fасеbооk, Twіttеr, okanye Inѕtаgrаm раgеѕ, okanye vіа yayo оwn hоmера.
I-10% icinyiwe Kutshanje sifumene iikhuphoni ezi-6 ezisebenzayo kwiLinux Foundation. Amalungu asebenzise ezi khowudi amaxesha ayi-11,075 ukugcina iiodolo zabo. Ukubona ukuba iikhowudi zisasebenza, yongeza izinto kwinqwelo yakho kwaye siza kubona ukuba zinokusebenza na ekuthengeni kwakho.
Usuku lwePats 2021! Iipesenti ezingama-20 zikhutshiwe IiLinux zeSiseko seKhonkco ezingama-50% Codes zeSaphulelo | Ikhowudi yokunyusa | Ukunikezela kunye nokuthengiswa ngo-2021.
I-15 yeepesenti eyongezelelweyo yokuKhutshwa kweKubernetes for Course Course & Exam Umsebenzi weLinux Foundation kunye nabaphuhlisi ababumba iLinux, i-SDN, i-IoT, ikhompyutha yefu, nokunye okuninzi. Isiseko seLinux sinokunceda abaphuhlisi ukuba bafumane izakhono kwaye basebenzisane. Inkqubo yoqeqesho yeLinux Foundation inezifundo eziphuhlisiweyo kwaye zifundiswe ngabaqeqeshi abaziingcali, uninzi lwazo ngabaphuhlisi abahlonitshwayo kwindawo yoluntu oluvulekileyo.
Ukuthengiswa kweSikolo sasehlotyeni: iipesenti ezingama-25 zikhutshiwe Kutshanje kuphelelwe lixesha i-Linux Foundation Coupons SUMMER25. Iipesenti ezingama-25 zikhutshiwe. MORETUX30. I-30% ikhutshiwe kuyo yonke iMiyalelo. TUX30. I-30% ikhutshiwe kuyo yonke iMiyalelo. Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-75 zesibonelelo seOpenJS kunye neNkqubo yoQeqesho. I-Chromebook yasimahla ekukhetheni iikhosi zoQeqeshiso eziKhokelwa nguMqeqeshi. Iikhuphoni ezifanayo, iiKhowudi zePromo kunye neeNtengiselwano eziphezulu.
Gcina i $ 185 Sebenzisa isigqebhezana seLinux Foundation okanye ikhowudi yokunyusa ukugcina inethiwekhi kunye nezisombululo zeshishini. Joyina isiseko kwaye ufumane ukufikelela kuqeqesho, isatifikethi, ukucwangciswa kweprojekthi kunye nokunye. Funda ngesoftware evulekileyo kwaye wandise ishishini lakho okanye umbutho ngeLinux Foundation.
I-21% icinyiwe iivawutsha zoVavanyo kunye neeBundles Ezi zilandelayo zikhuphoni ezikhethekileyo ezikhoyo kwi-Linux Foundation. Iipesenti ezili-15 zikhutshiwe. Fumana isaphulelo se-15% kulo lonke uqeqesho lwesiseko se-Linux, iinkqubo zokuqinisekisa kunye neenkqubo ze-bootcamp zexesha elincinci. Sebenzisa i-15% yesaphulelo. Ikhuphoni: Sebenzisa i-SCOFFER15 ekuphumeni.
I-30% icinyiwe I-Linux Foundation ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo obonelela ngoqeqesho olusemgangathweni ophezulu kwiiprojekthi zesoftware evulelekileyo kwihlabathi. Sebenzisa le khowudi ukufumana iidola ezingama-75 kwi-CKA, CKAD, kunye nezifundo zakho zokuqinisekiswa zeCKS eCrunchadeal! Oku kuthetha ukuba uza kufumana isaphulelo sama-25%. Iikhowudi zekhuphoni yesiseko seLinux: Isiseko seLinux sibonelela ngokufikelela simahla ...
I-20% icinyiwe Amatikiti eLinux Foundation kunye neekhowudi zokunyusa zenzelwe ukuba uzisebenzise xa ufuna ukugcina imali eyongezelelweyo ngelixa uthenga kuqeqesho.linuxfoundation.org. Thatha ithuba lokusebenzisa iikhowudi zentengiso kunye nezibonelelo zeLinux Foundation kweli phepha ukuqokelela zonke ezona khowudi kunye nezona zakutshanje zeLinux Foundation zekhowudi kunye nezivumelwano zokugcina ezinkulu.
I-30% icinyiwe Iikhowudi eziPhambili ze-Linux Foundation Promo & Deals ngoJulayi ka-2021. Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-15 zesaphulelo endaweni yonke; Iinkqubo zeLinux kunye neNkqubo yokuQinisekiswa kweLifu ngee- $ 200; Joyina kwaye Fumana izaphulelo eziKhethekileyo kwiLinux Foundation; Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 zesaphulelo kuDisemba, iiKhowudi zokuKhuthaza, kunye neeDrafti kwiLinux Foundation; Gcina iipesenti ezili-10 kuzo zonke iiodolo kwiRinex Key Finder
I-15% icinywe kwiivawutsha zovavanyo lweHyperledger Isiseko seLinux yindawo yokwakha indawo evulekileyo yendalo! Bona into onomdla kuyo kwaye ukonwabele ukunikezelwa okuhle. Fumana isaphulelo se-15% nakwezinye iikhosi zethu kwikhathalogu yethu yonke! Musa ukuthandabuza!
I-15% ishiye i-Node. Izatifikethi zeJS ezivela kwiSiseko seOpenJS: Iivawutsha zeeMviwo zeJSNAD kunye neJSNSD Gcina ngeLinux Foundation Free Training Coupons & Promo codes coupons and promo codes for August, 2021. Namhlanje eziphezulu zeLinux Foundation zoQeqesho lwaSimahla kunye neekhowudi zokunyusa isaphulelo: $ 100 kwiLinux nakwiNkqubo yokuQinisekiswa kweLifu ngoku: $ 200
RealMeNotCode! I-10% ishiye iodolo yakho Nge-2021 ka-Agasti-Fumana ezona zikhowudi zangoku zeLinux Foundation, iikhuphoni kunye nentengiso yokuthengisa. Kwaye, amanqaku okonga kwangoko kunye neengcebiso zethu zokuthenga ngaphakathi kwiLinux.
I-15% Cima iVawutsha yoVavanyo lwe-COA okanye isiQinisekiso Gcina i-89 okanye nangaphezulu nge-Linux Foundation coupons, iikhowudi zokunyusa kunye nezivumelwano zikaJulayi 2021. Ixesha elinikiweyo lijongana neSiseko seLinux: iipesenti ezingama-30 isuswe kuwo nawuphi na umyalelo. Fumana ama-89 ngeentengiso ezingama-57 zeLinux Foundation ezibonelela ngoJulayi 2021
Iipesenti ezingama-15 zikhutshiwe kwi $ 100 I-Linux Foundation ibonelela nge- $ 100 isaphulelo kwiinyanda ezininzi zekhosi. Kwakhona, unokufumana ukongezwa kwe-16% usebenzisa ikhowudi yekhuphoni "DCUBEOFFER". Eli phetshana lisebenza kuzo zonke iikhosi zeLinux Foundation kunye neenkqubo zokuqinisekiswa. Fumana izibonelelo zamva nje kunye neekhowudi ezikhethekileyo kwiLinux Foundation.
Iinkqubo zeLinux kunye neNkqubo yokuQinisekiswa kwamafu ye- $ 200 I-Linux Foundation ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo obonelela ngoqeqesho olusemgangathweni ophezulu kwiiprojekthi zesoftware evulelekileyo kwihlabathi. Sebenzisa le khowudi ukufumana iidola ezingama-75 kwi-CKA, CKAD, kunye nezifundo zakho zokuqinisekiswa zeCKS eCrunchadeal! Oku kuthetha ukuba uza kufumana isaphulelo sama-25%. Iikhowudi zekhuphoni yesiseko seLinux: Isiseko seLinux sibonelela ngokufikelela simahla ...
I-12% icinyiwe i-LFCS okanye iivawutsha zoviwo ze-LFCE okanye iiBundles I-Linux Foundation Coupons kunye neKhowudi yokuThumela Simahla. I-Linux Foundation idibanisa amawaka eengqondo ezinomdla kunxibelelwano lwasimahla nangokuvulekileyo lwezimvo. Ngobu bulumko obuhlangeneyo, abantu kuyo yonke indawo basebenzisa iLinux ukusombulula iingxaki ezinzima, ukuyila ngokukhawuleza kunangaphambili, kunye nokutshintsha indlela umhlaba osebenza ngayo kunye.
I-15% icinyiwe Akukho coupons zeLinux Foundation okanye iikhowudi zokunyusa ezikhoyo ngeli xesha, kodwa unokufumana ezinye izibonelelo ezingezantsi.
I-10% icinyiwe Gcina i-35 yeedola ngokomndilili xa usebenzisa ukuhlaziywa kweLinux Foundation coupons & promo codes zika-Agasti, 2021: Iikhowudi zokwazisa zeLinux Foundation ziqinisekisiwe mihla le. Ungalibali ukujonga onke amatikiti kunye nezaphulelo
$ 15 Cima nayiphi na ikhosi Fumana isaphulelo se-18% kwizifundo ezisisiseko zeLinux kunye nezatifikethi (CKA, CKAD, kunye neCKS) usebenzisa isigqebhezana se-kubernetes. Kwakhona, fumana i-100 yeedola kwikhosi yoqeqesho ye-kubernetes.
I-15% Cima nayiphi iVawutsha yoviwo okanye iBundle Oorhulumente baseMelika, i-European Union kunye nehlabathi liphela bayayamkela iLinux enikezwe uzinzo, ukungafihli, kunye nemvelaphi evulekileyo. Abasebenzi bakaRhulumente wase-US (kunye ne-Federal System Integrators) banelungelo lokufumana isaphulelo se-5% kwizibonelelo zoqeqesho zeLinux Foundation. Izaphulelo kuRhulumente zinokufaka isicelo kurhulumente nakwasekhaya ...
I-15% icinyiwe i-LFCS okanye iivawutsha zoviwo ze-LFCE okanye iiBundles Isiseko seLinux kuphela kombutho oneqonga elibanzi elinikezela ngezixhobo kunye nezixhobo zokuhlaziya ukulungelelanisa ukusebenza kweprojekthi kunye nokuzibandakanya koluntu, ukuzenzekelayo izibonelelo zetekhnoloji, ukwenza lula ulawulo lweprojekthi, kunye nokwenza lula isikali sokwazisa koluntu kunye nokwamkelwa kwamashishini ngokubanzi. ...
I-10% icinyiwe Bhalisa le Khosi "kuvavanyo lweemviwo zeNkqubo yokuQinisekiswa kweLinux" Ngokupheleleyo simahla kwiXesha eliMiselweyo. Oyena Mzingeli oPhezulu weKhuphoni- i-UDEMY eyi-100% yeKhowudi yamaKhuphiswano aSimahla-Elona Mzingeli weKhuphoni liBalaseleyo. Iimfuneko. Naluphi na uhlobo lomntu onqwenela ukwenza uVavanyo loVavanyo lweNkqubo yeLinux yoVavanyo. Inkcazo
Ukongeza i-15% kwiNdawo yokuHlala Ukufumana i-15% ye-Kubernetes CKA-CKAD evela kwi-Linux Foundation, sebenzisa isigqebhezana se-linux foundation, i-linux foundation coupons, i-linux promo code, i-linux isaphulelo se-code, i-linux foundation free chromebook, i-linux foundation coupon code, i-linux foundation free courses, i-linux foundation certification ikhuphoni, ikhuphoni yoviwo lwesiseko se-linux, isiseko se-linux esiqinisekisiweyo somlawuli wenkqubo ...
I-10% yeKhosi yokuSebenza kweLinux yokuSebenza Izitifiketi ezihlonitshwayo, nezingqinisisekayo ezivela kumthengisi ongathathi hlangothi njengeLinux Foundation ibonisa ubunzulu bezakhono zakho kubaqeshi abanokubakho, uninzi lwabo oluchaza ukuba kunokwenzeka ukuba baqeshe umntu onesiqinisekiso. Qinisekisa. UQEQESHO. Zuza izakhono zomthombo ovulekileyo ...
Intengiso yeNyanga yeeNcwadi kaZwelonke! Iipesenti ezingama-20 zikhutshiwe Yeyiphi eyona khowudi yekhuphoni ilungileyo kwiLinux Foundation? ... Ngaba akhona amatikiti e-insulin lispro? Ukubonelelwa kwe-insulin lispro kunokuba kwifomathi eprintiweyo, isaphulelo, ikhadi lokugcina, isithembiso setyala, okanye iisampulu zasimahla. Ezinye izibonelelo zinokuprintwa kanye kwiwebhusayithi, ezinye zifuna ukubhaliswa, ukugcwalisa iphepha lemibuzo, okanye ukufumana isampulu ...
I-15% icinyiwe kwi-Kubernetes CKA-CKAD Ubulungu beLinux Foundation yeSilivere; Qhuba iBhodi eLawulayo; Iinkqubo ezi-2 ezikwi-Intanethi kwikota yokwakha ubunkokeli bokucinga (kwimfuno, iYouTube, imijelo ephilayo) Iitikiti ezili-10 zeKubeCon zangaphakathi; Izihlalo ezili-15 zeLinux Foundation Training subscription (ezixabisa i $ 7.5k) Zizonke iikhuphoni ezili-10 zoQeqesho lweSiseko seLinux
Intle! Isaphulelo se-12% sale Khosi yale Nyanga "Ukuphuhlisa abaqhubi besixhobo seLinux." Sebenzisa ikhowudi: (5 days ago) Linux Foundation Coupon Codes Aug 2021 Linux Foundation 4th of July Sale 2021 - Save up to 65% off Linux Foundation. If you are looking for Linux Foundation Coupon Codes, then you are in the right place.Here are all currently active Linux Foundation coupons, discount codes, promo codes & … Via Clicktodiscount.com
Sebenzisa ikhuphoni kwaye ufumane isaphulelo se-10% kwisiqinisekiso soLawulo esivela kwiLinux Foundation: ngobuchule. Nge-27 kaJuni, ngo-2021. Okwangoku, i-Udemy iqhuba intengiso apho ungafumana zonke iikhosi nge-9.99 yeedola okanye ngaphantsi, eyi-95% ukuya kwi-97% isaphulelo kuninzi lwezifundo. Ngoku, uya kufumana uninzi lwezifundo ze- $ 9. Esi sibonelelo sisebenza ixesha elithile.